5 Casharro Photoshop ah si loo kordhiyo xirfadahaaga. Abuurista khadka tooska ah
Shaki kuma jiro Photoshop waxay weli tahay barnaamijka tafatirka sawirada xirfadleyda ah ee loogu talagalay naqshadeeyayaasha garaafyada badankood. Sidaa awgeed, kuwa hadda bilaabaya iyo kuwa mar horeba isticmaala, maanta waxaan rabnaa inaan wadaagno 5 Casharro Photoshop ah si loo kordhiyo xirfadaha iyo hal-abuurka; Dhammaantood waa fiidiyowyo YouTube-ka lagu martiqaaday, sidaa darteed way fududaan doontaa in la fahmo.
Guba tutorial qalab. Tani waa casharro muujinaya sida aagagga kala duwan ee muuqaalka xulasho ahaan loo madoobi karo. Kani maahan shaandho, laakiin waa burush lagu hagaajin karo cabirka la rabo waxaana laga heli karaa sanduuqa aaladda Photoshop.
Casharro sida loo isticmaalo aaladda beddelka midabka. Sida la tilmaamay, waa casharro ku dhowaad seddex daqiiqo ah halka isticmaalka qalabkani uu yahay mid faahfaahsan oo u oggolaanaya in lagu sawiro wax ka badan ama ka yar aag gaar ah oo sawir ah. Casharka wuxuu barayaa sida loogu beddelo midabada ku saleysan dhererka, midabka, fudeydka, ama midabka.
Qalabka qaabka gaarka ah. Xaaladdan oo kale, waa casharro kaa caawinaya inaad fahamto sida loo isticmaalo aaladda qaabka qaabeynta, iyadoo laga kala dooranayo noocyo kala duwan oo qaabab kala duwan leh iyo suurtagalnimada barashada sida loo isticmaalo dejimaha kala duwan ee qalabku bixiyo, oo ay ku jiraan istaroogga ama buuxi.
Qalabka Dodge. Casharradan Photoshop-ka ah waxaa nalagu barayaa sida xulashada loola shaqeeyo qaybaha kala duwan ee sawirka, iyadoo la adeegsanayo xulashooyinka burushka, soo-gaadhista, baaxadda, iftiinka indhaha, iwm.
Dhaqaaq Qalabka Aware. Asal ahaan waa cashar hordhac ah oo waliba qeexaya sida aad u falanqeyn karto pixels oo aad u bogsan karto meelaha aan loo baahnayn ee sawirka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » 5 Casharro Photoshop ah si loo kordhiyo xirfadahaaga
PsdCovers: sida loo sameeyo jeesjeesyo la'aan